यहोवाका साक्षीहरू - मूल्यवृद्धि विश्वास सारांश
10 तपाईंले चीजहरू यहोवाका साक्षीहरूको बारेमा थाहा पाउनुहुन्न
by इसहाक जे हैरिस
यहोवाका साक्षीहरूलाई बहस गर्दै
केहि पार्थिवहरूले बहस धर्मको आनन्द उठाउँछन् र परम्परागत ईसाई धर्मशास्त्रका धेरै अनुभवहरू छन्, तर उनी आफूलाई यहोवाका साक्षीको लागि तयार हुन सक्छन् जुन उनीहरूका ढोकामा दस्तक लगाउँछन्। प्रहरीधरहरा बाइबिल र ट्र्याट सोसाइटीको हेराइहरू अधिकांश प्रोटेस्टर्सका भन्दा भिन्न छन्, त्यसैले तपाईं छलफल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने प्रहरीधरहरा सोसाइटी सिद्धान्तहरू र यहोवाका साक्षीहरूको विश्वासहरू, तपाईंले ती फरक फरक कुराहरू बुझ्नुपर्छ।
यहाँ व्याख्या गरिएको 10 महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू छन् जुन पारंपरिक ईसाई विश्वासबाट फरक छ र यसले तपाईंलाई अझ राम्ररी बुझ्न र यहोवाका साक्षीहरूलाई बहकाउन मद्दत गर्नेछ।
01 को 10
कुनै ट्रिनिटी छैन
Coreyjo / सार्वजनिक डोमेन
साक्षीहरू मात्र एकमात्र, एकान्त परमेश्वरमा विश्वास गर्छन् र उहाँका नाउँ यहोवा हुनुहुन्छ। येशू, यहोवाको छोराको रूपमा, केवल आफ्नो बुबाको लागि फरक फरक दोस्रो हो। पवित्र आत्मा (निष्पक्ष) मात्र यहोवा परमेश्वरको सक्रिय शक्ति हो। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले गर्नुभन्दा केही कारणले गर्दा, उहाँले आफ्नो पवित्र आत्मालाई प्रयोग गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा आफैलाई एक व्यक्ति होइन।
02 को 10
परमेश्वरले ब्रह्मांडलाई प्रत्यक्ष रूपमा सिर्जना गर्नुभएन
साक्षीहरूले विश्वास गर्छन् कि माइकल आर्चन एउटा मात्र चीज हो जुन यहोवाले व्यक्तिगत रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। माइकलले अरूलाई यहोवाको निर्देशन अन्तर्गत बनाए। तिनीहरू पनि विश्वास गर्छन् कि येशू वास्तवमा माइकल बनाउनु भयो। माइकल, अहिले येशू भन्नुभएको छ, शक्ति र अख्तियारमा यहोवा मात्र दोस्रो हो।
03 मध्ये 10
कुनै अनन्त हानिकारक छैन
साक्षीहरूले विश्वास गर्छन् कि नरक , बाइबलमा उल्लिखित, मृत्यु पछि मात्र कब्रको वर्णन गर्दछ। केही अवस्थामा, यो पनि अनन्त विनाशलाई उल्लेख गर्न सक्छ। ध्यान दिनुहोस् कि तिनीहरू मानव आत्मामा मसीही विश्वासलाई अस्वीकार गर्छन्। जीवित वस्तुहरू (मानवहरू सहित) एक आत्मा छैन, तर बरु तिनीहरू आत्मा र आफैमा छन्।
04 मध्ये 10
केवल 144,000 स्वर्गमा जानुहोस्
साक्षीहरूले विश्वास गर्छन् कि केवल एक छान्नुहोस् - अभिषिक्तको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, वा "विश्वासी र हानिकारक दास वर्ग" - स्वर्गमा जानुहोस्। तिनीहरू येशूका छेउमा न्यायाधीशको रूपमा सेवा गर्नेछन्। कुल दास वर्गमा केवल 144,000 छन्। (ध्यान दिनुहोस् कि अभिषिक्त कुल संख्या यस संख्या भन्दा बढी छ) कहिलेकाहीँ, अभिषिक्तको सदस्यले येशूलाई केही पापको लागि रद्द गरी अन्य असफलताको लागि रद्द हुन सक्छ। जब यो हुन्छ, नयाँ अभिषिक्त भनिन्छ। साक्षीहरू यहोवाका इच्छाहरू अनुसार विश्वासी र विचलित दास हुन सम्झन्छन् किनभने तिनीहरू पृथ्वीमा उहाँका प्रतिनिधि हुन्। अभिषिक्तमा सोसाइटीको दृष्टिकोण हरेक पटक प्रायः परिवर्तन गर्न सकिन्छ किनभने 1914 अभिषिक्त साक्षीहरू जेठो हुन्छन्।
05 मध्ये 10
पार्थिव पुनरुत्थान र प्रमोदवन
गैर-अभिषिक्त साक्षीहरू यहाँ पृथ्वीमा सधैंभरि बाँच्न चाहन्छन्। तिनीहरूको कुनै "स्वर्गीय आशा" छैन। यो विश्वासयोग्य छ कि केवल विश्वासी साक्षीहरू आरमागेडोन रहिरहनेछन् र ख्रीष्टको हजारौं शासन देख्न पाउनेछन्। लगभग हरेक व्यक्ति जो पुनरुत्थान हुनेछ र फेरि जवान बनाइनेछ, तर यो आररेगेडोनको समयमा मारिएका ती व्यक्तिहरू समावेश गर्दैनन्। जीवित साक्षीहरू पुनरुत्थानको प्रशिक्षण लिने प्रहरीधरहरा समाजका शिक्षाहरू विश्वास गर्छन् र उनीहरूले जस्तै उपासना गर्छन्। तिनीहरू पृथ्वीलाई प्रमोदवन बनाउन पनि काम गर्नेछन्। कुनै नयाँ पुनरुत्थान व्यक्ति यो नयाँ व्यवस्थाको साथमा जान नदिई येशू स्थायी रूपमा मारिनेछ, कहिल्यै फेरि पुनरुत्थान गर्न सकिदैन।
06 मध्ये 10
सबै गैर-साक्षीहरू र "विश्वव्यापी" संस्थाहरू शैतानिक नियन्त्रणमा छन्
जो कोही पनि यहोवाका साक्षीहरू मध्ये एक होइन, "संसारमा व्यक्ति" हो र त्यसकारण शैतानको कामको भाग हो। यसले हामीलाई बाहिरी साथीहरूलाई बनाउँछ। सबै सरकार र गैर-प्रहरीधरहरा धार्मिक संगठनहरू शैतानको तर्फबाट पनि देखा पर्छन्। साक्षीहरू राजनीतिमा सामेल हुन वा यस कारणका लागि प्रयासहरू हस्तक्षेप गर्न निषेध गरिएका छन्।
07 मध्ये 10
Disfellowshipping र disassociation
सोसायटीको अधिक विवादास्पद प्रथाहरू मध्ये एक बहिष्कार हुन्छ, जुन प्रविधिको रूप हो र सबैमा एकैचोटि छ। सदस्यहरू गम्भीर पाप गर्न वा सोसायटीको शिक्षा र अधिकारमा विश्वासको कमीको लागि बहिष्कार गरिएको हुन सक्छ। एक जना साक्षी जसले सोसाइटी छोड्ने इच्छालाई असहमतिको पत्र लेख्न सक्छ। दण्डहरू मूलतः समान छन् किनभने, यो वास्तवमा असफ्लोशिप हुन अनुरोध मात्र हो।
साक्षीहरू किन मण्डलीहरूबाट अलग रहन्छन्
जीवन लुगाफाडि वा डिस्प्लो स्लिपिंग
08 को 10
यहूदीहरू जस्तै, नाजिसहरूले यहोवाका साक्षीहरूलाई सताए
प्रहरीधरहरा साहित्य जर्मनीको नाजी सरकारको बारेमा धेरै बोझ र चिन्ताजनक थियो। नतिजाको रूपमा, यो जर्मन साक्षीहरूको लागि यहूदीहरूको जस्तै एकाग्रता शिविरहरूमा फेंकिएको थियो। त्यहाँ एक भिडियो हो, जसलाई "बैंगनी त्रिकोण" भनिन्छ जुन यसले कागजात दिन्छ।
09 मध्ये 10
केवल बप्तिस्मा गरिएको पूर्णतया यहोवाका साक्षीहरू भरिएका छन्
धेरै ख्रीष्टियन अनुकरणहरूले कसैलाई सदस्यता लिने अनुमति दिन्छ जुन बिना कुनै प्रतिबंध चाहिन्छ, तर प्रहरीधरहरा समाजले केही प्रशिक्षण (सामान्यतया एक वर्ष वा धेरै) र ढोका बन्ने बेलामा सहभागी हुन अनुमति दिन अघि ढोकामा पर्दछ। सोसायटीले6मिलियन भन्दा बढी सदस्यको सदस्यता दाबी गर्दछ, तर जब धेरै अन्य डेमोमोमेन्टको स्तरमा गणना गरिन्छ, उनीहरूको सदस्यता सम्भव धेरै नै हो।
10 मध्ये 10
लाइट उज्ज्वल हुन्छ अन्तिम अन्त्यको रूपमा
प्रहरीधरहरा सोसाइटीले आफ्नो विश्वास र समय-समयमा नीतिहरू परिवर्तन गर्न जान्छ। साक्षीहरूले विश्वास गर्छन् कि सोसाइटी भनेको "सत्य" हो, तर यो यसको ज्ञान असामान्य छ। येशूले तिनीहरूलाई समयका साथ यहोवाको शिक्षाहरूको अन्तिम ज्ञानबारे निर्देशन दिनुहुन्छ। आरमागेडोन नजिक आइपुग्दा तिनीहरूको शिक्षाको शुद्धता बढ्नेछ। साक्षीहरू अझै सङ्गठनको वर्तमान दिनका शिक्षाहरूको आदर गर्न निर्देशन दिएका छन्। क्याथोलिक पोपको विपरीत, परिचालक निकायले अयोग्य हुने दावी गर्दैन। तर उनीहरूलाई ईश्वरले ईश्वरको पार्थिव संगठनलाई चलाउन नियुक्त गरिएको छ, त्यसोभए साक्षीहरूलाई शासक निकायको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, जस्तै तिनीहरू गल्ती भए तापनि तिनीहरू असक्षम भए।
Nietzsche र निहिलवाद
हिलरी क्लिंटनको धार्मिक पृष्ठभूमि र विश्वास
ओटोमन साम्राज्य को आक्रामक मा: 1300 - 1600 - क्रूसेड को टाइमलाइन
म धर्मको बारेमा दुर्व्यवहार गर्दैछु ... म के गर्छु?
एन्टिभिलिभ र विरोधी-धार्मिक आन्दोलन
तर्क र तर्कहरूमा दोषहरू: बर्नम प्रभाव र गुणाता
Freethought - तर्क बाट व्युत्पन्न
फ्याक्स स्टेट कानुनहरू फ्लैग बर्निंग, डिसेम्बर, दुर्व्यवहारमा
बलियो अस्थिरताको परिभाषा
कसको दोष छ?
स्वतन्त्रताको घोषणा र ईसाई धर्म मिथक
गोल्फनको फ्रंट स्टेज र ब्याक स्टेज व्यवहार
5 बुद्धिमान डिजाइनको लागि दोषी तर्क
कसरी कन्जुगेट "अबीर" (बार्कमा)
के एक एमेच्योर एवम् यूएस ओपन खोलिएको छ?
के सिगरेट बट Biodegradable हो?
शीर्षक पृष्ठ ढाँचाहरू
पेंटबल आधारभूत: कहां संकुचित एयर ट्यांकहरू?
20 शरारती पेडहरू जो गर्दै छन् यो सबै ह्याङ्ग आउट
सबै समयको शीर्ष 40 पप कलाकारहरू
स्पेनिश मा 'कंटेनर' प्रयोग गर्दै
लेस्टर एलन पिल्टन - हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर
शीर्ष 10 एडम लम्बर्ट गीतहरु
कलेज खारेजको लागि अपील पत्र कसरी लेख्नुहोस्
ABATE संगठनको बारेमा सबै
एक ट्री बाट प्रेम उद्धरण हिल
कलामा कंट्रास्टको परिभाषा के हो?
हिरोशिमा र नागासाकी को परमाणु बमबारी, 1945
हल्का धातु के हो?
पवित्र बिहीबार - अन्तिम चिसोको मास
Distributive Property Law with Simplifying Expressions
सामान्य कोर के हो? शीर्ष 8 प्रश्नहरूको जवाफ
बाइबिल मापन को रूपांतरण
के il vaut mieux que subjunctive को आवश्यकता छ?
डेजर्ट प्वाइन्टको सिद्धान्तहरू
भेर्न ट्रंक वा साइड इम्बलमा बदल्दै